Jubaland oo James Swan u gudbisay go'aan ku aadan doorashada Garbahaarey - Caasimada Online
Home Warar Jubaland oo James Swan u gudbisay go’aan ku aadan doorashada Garbahaarey
Jubaland oo James Swan u gudbisay go’aan ku aadan doorashada Garbahaarey
Kismaayo (Caasimada Online) – Madaxwayne ku-xigeenka koowaad ee Dowlad Goboleedka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan, ayaa shir ku qabsoomay habka fogaan aragga la yeeshay ergayga gaarka ah ee xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay ee Soomaaliya James Swan.
Waxaa shirka sido kale qeyb ka ahaa Guddoomiyaha Golaha Wakiilada Jubaland iyo qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ee matala Gobolka Gedo, Waxaana kulanka diiradda lagu saaray arrimaha la xiriira masiirka 16ka kursi ee deegaan doorashada labaad ee Jubbaland.
War kasoo baxay Xafiiska Madaxweyne ku-xigeenka Koowaad ee Jubaland ayaa lagu sheegay in kulanka uu kusoo dhammaaday is-afgarad iyo guul sida ay sheegeen mas’uuliyiinta shirka ka qeybgashay, inkasta oo aan faah-faahin laga bixin.
Xog ay heshay Caasimada Online ayaa sheegaysa in James Swan uu ku cadaadiyey maamulka Jubaland in xal deg deg ah laga gaaro doorashada kuraasta taalla magaalada Garbahaarey, si loo dhameystiro hanaanka doorashada Soomaaliya.
Si kastaba, xubnaha ka socday Maamulka Jubaland ayaa lagu warramay inay u sheegeen in Wakiilka QM in aan degmada Garbahaareey doorasho lagu qaban karin balse uu u sheegay in hal dhinac uusan go’aan ka gaari karin.
16 kursi ee taalla degmada Garbahaareey ee Gobolka Gedo ayaa kamid noqday caqabadaha heysta doorashooyinka, iyada oo Beesha Caalamka ay Maamulka Jubaland iyo Villa Somalia ku cadaadinayaan inay xal ka gaaraan.
Madaxweynaa Jubaland Axmed Madoobe ayaa dhowaan cadeeyey in aysan macquul ahayn doonista qaar kamid ah xubnaha beesha caalamka oo raba in Madaxweynaha Jubaland iyo Madaxweyne Farmaajo ay kala qeybsadaan xildhibaanada kasoo baxaya gobolka Gedo.
Ma cadda sida ay arrintan ku dhammaan doonto ayada oo la filayo in berri la dhaaro xildhibaanada cusub ee baarlamanka.